Mawduuc Is-dhexgal ah, Xogta Macaamilka ee ay Tahay Inaad Raad-raacdo
Macluumaadka Macaamilka Waa Inaad La Socotaa Mawduucaaga Macaamiil aha
Jimco, Nofeembar 6, 2015 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Muxamed Yaasiin
In kasta oo aan dhammaanteen awoodno, inta badan, waxaan isku raacsannahay in waxyaabaha ku jira is-dhexgalka aysan ahayn wax "cusub," horumarka laga sameeyay tiknoolajiyada suuqgeynta ayaa ka dhigtay waxyaabaha is-dhexgalka leh dhammaantood waxtar badan u leh dadaalka suuqgeynta qofka. Inta badan noocyada ku jira is-dhexgalka u oggolow noocyada inay soo ururiyaan qaddar fara badan oo macluumaad ah oo ku saabsan macaamiisha - macluumaad loo isticmaali karo in si wanaagsan loogu daboolo baahida macaamiisha isla markaana looga caawiyo dadaallada suuqgeynta mustaqbalka. Hal shay oo badan oo suuqleydu ay la halgamayaan, si kastaba ha noqotee, waxay go'aaminayaan nooca macluumaadka ay doonayaan inay ku soo ururiyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Ugu dambeyntiina, waa arrin ka jawaabeysa su'aashaas dahabiga ah: "Macluumaadkee macmiil ah ayaa noqonaya kan ugu faa'iidada badan himilada urur ee ugu dambeeya?" Halkan waxaa ku yaal talo soo jeedinno loogu talagalay xogta macmiilka oo runtii ku habboon in lagu bilaabo dabagalka inta lagu gudajiro dhiirrigelintaada soo socota ee isdhexgalka
Ururinta magacyada emaylka iyo lambarrada taleefannada ayaa umuuqan kara wax iska cad, laakiin waxaad layaabi laheyd inta qof ee aan sidan sameynin. Waxaa jira tiro noocyo ah oo halkaas ka jira oo abuuraya waxyaabo is-dhexgal leh oo hufan oo loogu talagalay ujeeddada wacyigelinta astaanta; markaa xog aruurintu waxay ku egtahay in lagu xaaqo sariirta hoosteeda.
Hadday ciyaar tahay ama barnaamij madadaalo u gaar ah, sumaddaadu wali way ka faa'iideysan kartaa ururinta macluumaadkaas. Khadka hoose, astaantaadu waxay qaban kartaa dallacsiin weyn oo aad u baahan tahay u doodayaasha astaanta (sida kuwa la falgalay barnaamijkaaga) inay wax ka ogaadaan. Kaliya maahan inaad doonaysid inay ogaadaan, laakiin waxaad dooneysaa inay si dhab ah uga faa'iideystaan ​​dhiirrigelinta markay wax ka iibsanayaan dukaankaaga.
Hadda, waxaan gebi ahaanba ogaaday in ay jiraan waqtiyo aan runtii "macno samaynayn" weydiisashada macluumaadka xiriirka. Waan gartay. Kahor (ama xitaa kadib) ciyaar ciyaar, cidna runti ma rabto inay la wadaagto macluumaadkooda. In kasta oo aad ogtahay inaad u adeegsan doonto macluumaadka xiriirka macmiilka si cadaalad ah, sharci ah, si xushmad leh, haddana waxaa jira macaamiil badan oo ka baqaya inaadan adeegsan. Nasiib wanaagse, waxaa jira hal shay oo aad sameyn karto oo si gaar ah waxtar ugu leh qaar badan oo ka mid ah magacyada aan la soo shaqeeyay - taasina waxay bixisaa nooc ka mid ah dhiirigelin soo celinta macluumaadka aasaasiga ah ee xiriirka. Si kastaba ha noqotee, sidee bay u furan karaan hadiyaddooda ama abaalmarinteeda haddii aynaan garanayn cidda ay yihiin?
Dhiirrigelintu waxay noqon kartaa mid weyn ama yar inta astaantaadu u aragto inay ku habboon tahay. Ka dib ciyaar ciyaar ama qaadashada sahan kooban (wax kasta oo ka mid ah waxyaabahaaga is-dhexgalka ahi ka kooban yahay, runti), waad weydiin kartaa haddii ay jeclaan lahaayeen inay doortaan fursad ay ugu guuleystaan ​​abaalmarin weyn ama ay doortaan inay kuubbo ama hadiyad helaan . Dabcan, ujeedka waxaas oo dhan ayaa ah in dadku ay jecelyihiin waxyaabaha bilaashka ah (ama ay fursad u leeyihiin inay ku guuleystaan ​​waxyaabo bilaash ah). Macaamiisha waxay u janjeedhayaan inay bixiyaan macluumaadkooda si loogala xiriiro dhiirrigelintooda.
U gaar ah Google Analytics, la socoshada dhacdadu waa la socoshada waxqabadka walxaha is-dhexgalka ee boggaaga sumadda. Waxqabadyadan (ama "dhacdooyinka") waxay ka koobnaan karaan nooc kasta oo isdhexgal ah - wax kasta oo ka yimaada garaacista badhanka ciyaarta / hakadka ee fiidiyoowga ah, ka tagista foomka, gudbinta foomka, qaboojinta ciyaarta, soo dejinta faylka, iwm. . Ku dhowaad wax kasta iyo is-dhexgal kasta oo ku saabsan warbaahintaada is-dhexgalka bulshada ayaa lagu tiriyaa "dhacdo."
Maxaa ka dhigaya dabagalka dhacdooyinka mid waxtar leh waa inay bixiso aragti weyn oo ku saabsan sida macaamiishaadu u maleegaan bartaada internetka iyo sidoo kale sida ay u xiiseynayaan waxyaabahaaga. Haddii dabagalka dhacdadu muujiso in dadku kaliya garaacayaan badhanka ciyaarta ciyaar hal mar ah, waxay noqon kartaa tilmaame in ciyaarta ay caajiso ama si fudud aysan u babac dhigi karin. Dhinaca foorarka, dhawr tallaabo oo “ciyaar” ah ayaa muujin kara in dadku runtii ku raaxaystaan ​​ciyaarta ka socota boggaaga. Sidoo kale, in aan la arkin dhacdooyinka / ficillada "soo degsasho" ku filan waxay noqon kartaa tilmaan wanaagsan in waxyaabaha la soo dejisan karo (e-hage, fiidiyoow, iwm) aysan xiiso lahayn ama waxtar u lahayn in la soo dejiyo. Markay magacyadu leeyihiin xogta noocan ah, waxay horumar weyn ku samayn karaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin, iyo sidoo kale istiraatiijiyadooda guud ee suuq geynta.
Isku-darka raadinta dhacdooyinka ee boggaaga ayaa noqon kara wax yar, laakiin nasiib wanaag, waxaa jira tiro ka mid ah sida loo hagayo halkaas (oo ay ku jiraan mid Google) kaa caawin kara hirgeli raadinta dhacdo GA quruxsan fudud. Waxaa sidoo kale jira hageyaal fara badan oo heer sare ah oo ku saabsan sida loo helo loona akhriyo warbixinnada GA ee dhacdooyinkii aad raad-raacday.
Jawaabo Xullo Badan
Nooca ugu dambeeya ee macluumaadka macmiilka waxaan aad ugula talinayaa raadraaca inay yihiin jawaabo badan oo xulashooyin ah su'aalo, baaritaanno iyo qiimeeyayaal. Sida iska cad, su'aalaha xulashada badan (iyo jawaabaha) aad ayey u kala duwanaan doonaan, laakiin waxaa jira 2 wadiiqo oo lala socdo jawaabaha xulashada badan ayaa kaa caawin kara astaantaada! Midkood, sida raadraaca dhacdooyinka, su'aalaha xulashada badan iyo jawaabaha waxay astaantaada siin doonaan fikrad wanaagsan oo ku saabsan waxa inta badan macaamiisha ay kaa doonayaan ama kaa rajeynayaan. Adoo siinaya macaamiishaada ikhtiyaarro kooban oo kooban oo aad ka kala dooran karto (su'aalahaaga ama sahankaaga gudahood), waxay kuu oggolaaneysaa inaad qayb kasta jawaab ugu qaybiso boqolkiiba; si aad ugu soo ururiso macaamiisha qaarkood jawaabahooda gaarka ah. Tusaale ahaan: Haddii aad weydiiso su'aasha, "midabkee midkee ah haddii aad ugu jeceshahay?" oo aad keentid 4 jawaabood oo suurtagal ah (Casaan, Buluug, Cagaar, Jaale), waxaad ku go'aansan kartaa midabka ugu caansan inta qof ee soo xushay jawaab cayiman. Tan guud ahaan laguma sameyn karo jawaabaha foomka la buuxiyo.
Sababta kale ee loola socdo jawaabaha xulashada badan waxay noqon kartaa mid waxtar leh ayaa ah in magacyadu ay si dheeri ah ugu sii xirmi karaan adeegsadayaasha gaarka ah ee bixiyay jawaab cayiman (Ex: jiidaya liiska isticmaalayaasha ku soo jawaabay midabkooda ay jecel yihiin "casaan"). Waxay u oggolaaneysaa noocyada inay diiradda saaraan dadaalladooda suuq-geynta dadka isticmaala gaarka ah ee ku jira qaybtaas - ha ahaato iyada oo loo marayo suuqgeynta emaylka, boostada tooska ah ama wicitaannada taleefanka. Intaa waxaa sii dheer, waxaad ogaan kartaa in macaamiisha ku jawaabtay jawaab gaar ah ay leeyihiin waxyaabo wadaag ah oo ay tahay in la aqoonsado. Qaar ka mid ah su'aalaha xulashada badan ee badan ee aad weydiin karto badanaa tixgalinta: waqtiga iibsiga, nooca la doonayo, sumadda hadda - wax kasta oo ka caawin lahaa wadahadal kasta oo mustaqbalka ah, runtii!
Macno malahan ujeedka kama dambaysta ah ee ka kooban waxyaabahaaga is-dhexgalka ah, ururinta xogta dhinac kasta oo ka mid ah macaamilka macaamilka macaamilku waa u qalantaa dadaalka. Iyadoo tartamayaasha cusubi ay soo baxayaan maalin kasta, waxaa lagugu leeyahay sumaddaada si aad u ogaato cidda ay macaamiishaadu yihiin iyo waxa ay doonayaan. Horumarka dhanka teknolojiyaddu maahan oo keliya inuu suurta galiyay in la soo ururiyo xogtaan, laakiin waxay si aad ah ugu fududahay in la sameeyo. Iyada oo leh dhammaan ilaha ay heli karaan suuqleyda, cudur daar ma leh in aan la socon wax walba!
Waa maxay DMARC? Sidee DMARC U Dagaalaa Email Phishing?
Tirakoobyadan waa inay saameyn ku yeeshaan aragtidaada ku saabsan Suuqgeynta Mobilka